श्रीमानको एसिड आक्रमणबाट घाइते खड्काको अवस्था गम्भीर, कहाँबाट ल्याएका थिए विष्णुले एसिड? - Everest Dainik - News from Nepal
श्रीमानको एसिड आक्रमणबाट घाइते खड्काको अवस्था गम्भीर, कहाँबाट ल्याएका थिए विष्णुले एसिड?
काठमाडौं, जेठ २ । बुधबार साँझ काठमाडौंका कालोपुलमा आफ्नै श्रीमानको एसिड प्रहारबा घाइते भएकी जेनी खड्काको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको अस्पतालले जनाएको छ । एसिड प्रहारबाट घाइते भएकी खड्कालाई सुरुमा ओम अस्पताल लगिए पनि त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि हाल उनको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सुरुमा आइसियुमा राखेर उपचार गरिएकोमा अहिले वार्डमा सारिएको र बिहीबार दिउँसो उनको जलेको भागमा ड्रेसिङ गरिने जेनीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई उदृत गर्दै अस्पतालका कर्मचारी सुमन निरौलाले बताए।
एसिडका घाइतेहरूको अवस्था थाहा पाउनका लागि उपचार गरेको ४८ देखि ७२ घण्टापछि मात्र खतरामुक्त भए नभएको थाहा हुने हुँदा अहिले नै केही भन्न नसकिनै उनले बताए। एसिड प्रहारबाट हाल उनको दुवै हात, छातीको अगाडिको भाग, घाँटीको भाग र अनुहारको तल्लो भाग गरेर शरीरको २० प्रतिशत भाग जलेको अस्पतालले जनाएको छ ।
आफूसँग बस्न नमानेको भन्दै विष्णु भुजेलले श्रीमतीलाई एसिड प्रहार गरेको स्वीकार गरेका छन्। बुधबार साँझ श्रीमतीलाई एसिड प्रहार गरेर भक्तपुरतिर भागेका विष्णुलाई प्रहरीले काँडाघारीबाट पक्राउ गरेको थियो। एसिड प्रहार गरेर भाग्दै गरेका उनलाई पक्राउ गरेर महानगरीय प्रहरी परिसरमा राखिएको छ।
कहाँबाट ल्याए भुजेलले तेजाब?
बुधबार साँझ भुजेलले जेनीलाई भेट्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरुको पटकपटक सम्पर्क भएको कल डिटेल रेकर्डले पनि देखाएको छ । तर, करिब ८ बजेतिर उनले जेनीको शरीरमा एसिड प्रहार गरिदिए । नजिकै रहेका मानिसहरुले उनलाई ओम अस्पताल पुर्‍याए । प्राथमिक उपचारपछि उनलाई कीर्तिपुर अस्पताल पठाइएको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको डीएसपी होविन्द्र बोगटीकाअनुसार भुजेल जेनीलाई एडिस प्रहार गर्न भनेर योजनाबद्ध रुपमै काभ्रेबाट आएका थिए । काभ्रेको एक सुन पसलबाट एसिड मागेर उनी काठमाडौं आएका थिए । ‘पसलेको मोटरसाइकल बनाइदिने गर्दोरहेछ । त्यही चिनजानको भरमा एसिड ल्याएको रहेछ’, बोगटीले भने, ‘पसलेलाई उसले खुट्टाको खिल निकाल्ने भनेर एसिड मागेको रहेछ ।’ त्यो कुन एसिड थियो भन्ने खुलेको छैन । यद्यपि, अनुसन्धान भइरहेको उनी बताउँछन् ।
ट्याग्स: Bishnu Bujel, Jeny Khadka